बाबुराम सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारण– 'चेइ' नभनी कुकुर पनि जाँदैन - हाम्रो देश
काठमाडौँ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा र्पूवप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी हुनुभएन । सहभागी नहुनुको कारणबारे उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ ।
आफूलाई उक्त बैठकमा नबोलाइएको प्रष्ट पार्दै डा. भट्टराईले नबोलाईकन त कुकुर पनि कसैको घरमा नजाले बताउनुभएको हो । सामाजिक सञ्जाल ट्वटिरमा प्रष्टीकरण लेख्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई नै निम्ता नआएको बताउनुभएको हो । यद्यपि सोही पार्टीका अन्य अध्यक्षहरु महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाल भने उक्त सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित थिए ।
‘चेइ नभनी त कुकुर पनि कसैको घरमा जाँदैन रे ! मिडियाबाट सुनिएको कथित सर्वदलीय बैठकमा प्रम–निवासको मिठोमसिनो उदरस्थ गर्न पाइएला भनेर त्यत्तिकै हाम्फालेर जाने कुरा भएन,’ डा भट्टराईले लेख्नुभएको छ, ‘जसपाको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय बालकुमरीमा सोध्दा कुनै जानकारी थिएन । पछि मिडियाबाटै सुनियो बैठक बहिष्कार पो भएछ ।’
उहाँले सर्वदलीय बैठकलाई एमसीसी बैठक भनेर समेत छेड गर्नुभएको छ । स्मरणीय छ, सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी (अमेरिकी मिल्लेनियम च्यालेन्ज सहयोग सम्झौता) नै मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो ।